Star Wars: Dinta ga-adaa afọ a na Android | Gam akporosis
Anyị nwere ọhụrụ Star Wars egwuregwu maka njedebe nke afọ na ọ bụ dinta, dị ka Nintendo kwupụtara maka Mgbanwe ụbọchị ole na ole gara aga, ọ bụ ezie na anyị abịaghị n'oge na akụkọ ahụ, ọ bara uru na anyị nwere ike ịbanye ọzọ n'ime eluigwe na ala nke George Lucas kere.
Ma ọ bụ nke ahụ anyị ga-enwe maka gam akporo na iOS maka obibia gi na njedebe nke afo ma oburu na ihe obula n’aga dika odi. Otu egwuregwu Star Wars nke a ga - ahụ n’etiti akụkụ VI na VII nke aha ndị Disney nwere taa; ikpe mara na anyị nwere nnukwu usoro a na-akpọ Mandalorian.
Star Wars: dinta, na dị ka ị pụrụ ịhụ na video ngosi, ọ na-ewe anyị ka egwuregwu egwuregwu na-eche ihu ndị ọzọ 4 Player maka ihe ekwesịrị ịbụ MOBA anyị na-agaghị elelị ozugbo ha nwetara ya na gam akporo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Star Wars: Dinta na-abịa gam akporo mechara nke afọ a